अजरबैजानले एक सेकेण्ड पनि युद्धविराम नमानेको अर्मेनियाको आरोप:: Naya Nepal
अजरबैजानले एक सेकेण्ड पनि युद्धविराम नमानेको अर्मेनियाको आरोप
२९ असोज, काठमाडौं । अर्मेनियाका राष्ट्रपतिले अजरबैजानसँग नागोर्नो काराबखमा जारी झडपमा आफ्नो सेनातर्फ ठूलो नोक्सानी भएको बताएका छन् । उनले टेलिभिजनमा सम्बोधनको क्रममा बोल्दै निकोल पाशिन्यानले अजरबैजानमाथि युद्धविरामको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘अजरबैजानले एक सेकेण्डको लागि पनि युद्धविराम मानेन र अहिलेसम्म पनि उसले आफ्नो आक्रमण जारी राखेको छ । यसको अर्थ अजरबैजान पूरा क्षेत्रलाई नै कब्जा गर्ने आफ्नो नीतिमा अडिग देखिएको छ ।’नागोर्नो काराबहमा अजरबैजानबाट भएको नोक्सानीबारे बोल्दै पाशिन्यानले आफ्ना वीर सहिदप्रति शोक व्यक्त गरे ।
उनले टर्की र अजरबैजानको गठबन्धनले आफ्नो आक्रमण नरोकेको आरोप लगाए ।यसैबीच अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलीवले अर्मेनियामाथि मुलुकको ग्यास पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । साथै अजरबैजानले अर्मेनियालाई त्यसको गम्भीर जवाफ दिने चेतावनी पनि दिएको छ ।अर्मेनिया र अजरबैजानबीच युद्ध सुरु भएको दुई साताभन्दा लामो समय भइसकेको छ । तर, अझै पनि युद्ध रोकिएको छैन । यसअघि शनिबार रुसको मध्यस्थतामा दुई मुलुकको बीचमा युद्धविरामको सम्झौता भएको थियो । तर, यो सम्झौताको पालना भने भएको छैन । दुवै मुलुकले एकअर्कालाई यो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अर्मेनिया र अजरबैजानबीच युद्धविराम उल्लंघनको आरोप-प्रत्यारोप
अर्मेनिया र अजरबैजानबीच विवादित भूमिको विषयलाई लिएर जारी युद्ध रोक्नका लागि रुसको सहयोगमा भएको युद्धविरामपछि पनि युद्ध भने रोकिएको छैन ।अर्मेनिया र अजरबैजान दुवैले एकअर्कालाई युद्धविरामको सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । दुई मुलुकको बीचमा भएको युद्धविरामको सम्झौता लागू भएको केही समयमा नै दुवैले एकअर्कालाई यो सम्झौता तोडेको आरोप लगाएका हुन् ।अर्मेनियाले युद्धविराम सम्झौता लागू भएको पाँच मिनेटमा नै अजरबैजानले विवादित भूमि नागोर्नो-काराबखमा अर्मेनियाको सेनामाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै अजरबैजानले पनि अर्मेनियाको सेनाले गत राति गान्जा सहरमा आक्रमण गरेको र उक्त आक्रमणमा परी सात जनाको मृत्यु भएको बताएको छ । अर्मेनिया र अजरबैजानबीच विवादित भूमिको विषयलाई लिएर जारी युद्धमा परी अहिलेसम्म तीन सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ ।आधिकारिकरुपमा विवादित नागोर्नो-काराबख अजरबैजानको भूमि हो । तर, यहँँका बासिन्दाहरु भने आध्यािित्मक अर्मेनियनहरु धेरै छन् । उनीहरु अजरबैजानको नियम मान्दैनन् । त्यसुका लागि उनीहरुले अर्मेनियाको सहयोगमा आफूलाई स्वतन्त्र मुलुकको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, दुवै मुलुकले यो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मुलुक नभई आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अजरबैजान-अर्मेनिया युद्धमा ड्रोनको भूमिका
विवादित भूमि नागोर्नो-काराबको विषयलाई लिएर युद्ध भइरहेका बेला अजरबैजानले अर्मेनियाका सैनिकमाथि ड्रोन आक्रमण गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।यो टर्कीको ड्रोन हो । यससँगै अजरबैजानले टर्कीसँग ड्रोन पनि किनेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ । र, ड्रोन आक्रमणको भिडियोले दुई देशको युद्धलाई थप उग्र बनाएको छ ।
पछिल्लो समय दुवै मुलुक हतियार थप्ने दिशामा अघि बढेका छन् । अजरबैजानले भने अर्मेनियाको तुलनामा धेरै हतियार किनेको छ, जसमा विशेषगरी ड्रोन पनि सामेल छ ।
नागोर्नो-काराबखको युद्धमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय हो टर्कीको बायरक्तार टीबी-२ ।अहिले दुई मुलुकबीचको युद्धको फोटो पनि अजरबैजानको सेनाले सोही विमानबाट खिचेको बताइएको छ । यो ड्रोन टर्कीको कम्पनीले निर्माण गरेको हो । टर्कीले सिरिया र लिबियाको युद्धमा पनि यो मानवरहित ड्रोनको प्रयोग गरेको थियो भने युक्रेनलाई पनि बेचेको थियो । सर्बियाले पनि यो ड्रोन किन्ने इच्छा देखाएको थियो ।जुन महिनामा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा पनि अब छिटै नै अजरबैजानको सेनालाई यो हतियार मिल्ने दाबी गरिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म आधिकारिकरुपमा अजरबैजानले यो ड्रोन किनेको पुष्टि हुन सकेको छैन । गत साता अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेवले आफूहरुसँग टर्कीको केही विमान रहेको बताएका थिए ।तर उनले यससँग सम्बन्धित कुनै विवरण भने दिएका थिएनन् । विश्लेषकहरु अजरबैजानले युद्ध शुरु हुनुभन्दा ठीक पहिला यस्ता हतियारहरु पाएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
टर्कीले अहिलेसम्म ड्रोन निर्यात तथा त्यसको प्रयोगको विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले यसमा तेस्रो मुलुकको प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने जानकारहरुले अनुमान गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार टर्कीसँग इजरायलको दुई हेरोन टीपी, १० मर्मेस ४५०७, एक सय स्ट्राइकर्स र ५० हारोप्स ड्रोन छन् ।इजरायल र अजरबैजानको ज्वाइन्ट कम्पनी आजाद सिस्टम्सले एरोस्टार ड्रोन र आर्बिटर-१ र आर्बिटर-३ बनाएका छन् । किंग्स बलेज लण्डनका रिसर्चर रोब लीका अनुसार अर्मेनिया र अजरबैजानको बीचमा युद्ध चर्किनुको कारण बम खसाल्न सक्ने किसिमको ड्रोन हुनु हो । यसअघि अजरबैजानसँग लक्षित क्षेत्रमा उडेर मात्र त्यो क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्थ्यो ।अर्मेनियाले सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा पनि एक एक विमानलाई कुनै एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइलले आक्रमणमा ध्वस्त पारिदिन्छ । यो मिसाइल केही हदसम्म सोभियत संघको पालाको एन-४ जस्तो थियो ।
अर्मेनियाले किनेको छैन ड्रोन
अर्मेनियाले अजरबैजानको सैन्य क्षमतालाई कमजोर आकलन गरेको कारण ड्रोन नकिनेको हुन सक्ने रुसी विशेषज्ञ आन्द्रेई फ्रोलोव बताउँछन् । अजरबैजानले प्रयोग गरेको जस्तो ड्रोन रुससँग नभएकाले अर्मेनियालाई अब ड्रोन किन्न इरान वा चीनको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।तर, उसले यसका लागि आवश्यक पैसा जुटाउन सक्छन् । आफ्नै मुलुकमा ड्रोन निर्माणको अर्मेनियासँग कुनै योजना छैन ।अर्मेनियाले क्रंक नामक हल्का ड्रोन बनाउँछ । यसको अर्थ क्रेन भन्ने हुन्छ । तर, यसको प्रयोग अहिले जारी युद्धमा गरिएको वा नगरिएको भन्ने विषयमा भने कुनै स्पष्ट जानकारी भने दिइएको छैन ।
ड्रोन अजरबैजानलाई कति सहयोग ?
अजरबैजानले अर्मेनियामा ड्रोनबाट आक्रमण गरेको दर्जनौँ भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अजरबैजानको ड्रोन अर्मेनियाको सैन्य वाहनहरुलाई सबैभन्दा धेरै लक्षित गरिरहेको देखिन्छ ।अर्मेनियाको सेनाको अन्य अड्डामा वपन अजरबैजानले निशाना साँधेको देखिन्छ । यद्यपि अजरबैजानले यो युद्धमा कति ड्रोन आक्रमण गर्‍यो र यो आक्रमणमा अर्मेनियाको सेनाको कति नोक्सानी भयो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट जानकारी पाउन सकिएको छैन ।विशेषज्ञहरुका अनुसार अर्मेनियाको सैन्य क्षमता तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिएकाले अजरबैजानको ड्रोनले सजिलै निशाना लगाउन सक्छ । अजरबैजानले अर्मेनियाको कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दै विवादित क्षेत्रमा मानिससहितको लडाकू विमान वा हेलिकोप्टर पठाएको छैन ।
ड्रोनबाट बच्न सकिन्छ ?
लण्डनका रक्षा विशेषज्ञ रोब लीका अनुसार अजरबैजानको ड्रोनले अर्मेनियातर्फ गम्भीर नोक्सानी पुर्‍याएको छ । तर, अहिलेसम्म यसको कुनै स्पष्ट जानकारी भने छैन ।रुसी विशेपज्ञ भिक्टर मुरखोव्स्कीका अनुसार अजरबैजानलाई ड्रोनको माध्यमबाट फाइदा पुगे पनि यसबाट बच्नै नसकिने भने छैन । उनका अनुसार सिरियामा पनि सशस्त्र चरमपन्थीले ड्रोनबाट बच्ने रणनीति विकास गरेका थिए । साथै उनीहरु यसमा सफल पनि देखिएका छन् र त्यसैले अर्मेनियासँग अहिले आधुनिक हतियार र रक्षा प्रणाली खरिद गर्ने पैसा नभए पनि उनीहरुले सिरियाको रणनीतिको प्रयोग गर्न सक्ने मुरखोव्स्कीको भनाइ छ ।यस्तोमा अजरबैजानको ड्रोनबाट बच्न डमी सैन्य अखडा निर्माण गर्न सकिने पनि विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । यसअघि पनि अजरबैजानको ड्रोन एक नक्कली मोडललाई लक्षित गरेको थियो ।